Maxaad ka taqaan taariikh nololeedkii Istarliin Cabdi Caruush? – Kaasho Maanka
Maxaad ka taqaan taariikh nololeedkii Istarliin Cabdi Caruush?
W/Q: Naimo Mohamed
Qaybta: Dumarka, Sooyaal
Waan hubaa inaanan qoraal ku soo koobi karin waxqabadkii iyo taariikhdii ay ka tagtay laakiin waxa aan isku dayayaa inaan si kooban u xuso shaqsiyadda iyo howl karnimadii gabdhan karaamada weyn aan u hayo ee kor ku xusan!
Waxay ku dhalatay gobolka shabeellada dhexe sannadkii 1957,waxayna ku barbaartay oo wax ku baratay magaalada (Marka/Marca) ee caasimadda u ah gobolkaas, Marka waxa ay 90 kilometre dhinaca qorrrax u dhaca ka jirtaa magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxay “Medical degree” ka soo qadatay jaamacad ku taalla Talyaaniga,waxayna dalkaa Talyaaniga ku nooleyd muddo 13 sano ah ayadoo ugu danbeyn dalka samata-bixintiisii u soo laabatay!
Wax qabadkeedii bulshada Soomaaliyeed:
1. La dagaalanka qabyaaladda iyo dib u heshiisiinta ummadda somaaliyeed
Burburkii dalka saameeyay Kadib waxay go’aansatay inay noqoto qof u ololeeya nabadda iyo gargaarka dadka tabaalaysan “Peace activist and aid worker”. Waxay dagaal adag la gashay qabyaaladda si ay usoo celiso rajadii burburtay. Waxayaabaha ay caanka ku ahayd waxaa ka mida inay dadkeeda iyo dalkeeda jecleyd hadana waligeed la ganban waxay tahay. Istarliin ma xiran jirin qamaarka/xijaabka madaxa la saarto. Sanadkii 1992 waxay kamid ahayd dadkii ugu horreeyay ee dhalleeceeya kana digay cawaaqib xumada ka dhalan karta jiritaanka dhaqdhaqaaqyada iyo kooxaha xiriirka la leh xagjirnimada Islaamka ee ku baahayay waddanka. Waligeed kama ganban inay isbadal ka dhax raadiso dadkeeda oo ay ogtahay inay yihin bulsho ragga kaliya wax hogaamiyaan. Waxay dadku u yaqaneen gabar furfuran, farxad badan sidoo kalana aad u karti badan.
Waxay si aan ganbasho lahayn ula hadli jirtay dagaal oogayaashii dalka la wareegay iyadoo marar badan hogaamisay shirar dib uheshiisiin. Tusaale waxay isku dayday inay wada hadashiiso Maxamed Faarax Caydiid iyo beesha caalamka. Sidoo kale waxay beesha calamku u yaqaneen qaar badan oo kamida ah inay tahay “The first president of new democratic Somalia” madax waynihii ugu horeeyay ee soomalai dimuqraadi ah yeelato, hase ahaate iyadu marnaba mä rabin inay siyaasi noqoto oo dhankaa uma janjeerin.
QORMO LA XIRIIRTA: Maxaa loo gudaa hablaha Soomaaliyeed?
2: Tabarucaadda iyo dhismaha goobaha asaasiga ah.
Waxyabaha ugu badan ee lagu xasuusto haweeneydan sharfta leh ayaa ah inay dalka keentay mashaariic aan la soo koobi karin, magaalooyin badanna ilaa maanta ay ka faa’iideen. Tusaale waxay magalada Marka ay ka samaysay isbitaal ay leeyihin hooyada iyo dhallaanka, kaasi oo ay ku samata baxeen hooyooyin aan lasoo koobi karin iyo carruur badan. Sidoo kale clinics kaas waxaa ka faa’iidayay wax ka badan 3000 oo caruur soomaaliyeed ah. Halka sidoo kale Magaalada Guriceel ee ku tirsan gobolka Galgaduud ay ka samaysay Isbitaalkii ugu horreeyay ee Galgaduud yeelato burburka ka dib uguna tayada badnaa looguna magac daray “Istarliin Abdi Arush”.
FG: Isbitaalka ilaa maanta wuu shaqeeyaa waxa uuna laf dhabar u yahay nolosha dadka magaalada ku nool iyo guud ahaan gobolka. Waxa aan aad ugu faraxsanahay in isbitaalka aan indhahayga ku soo arkay oo uusan sheeko igu ahayn.
Mashaariicda ay dalka keentay sidoo kale waxaa kamid ahaa inay iskuullo dhistay, sidoo kalena ay saacidday kooxda Olembikada Soomaliyeed.
Inkastoo waxaas oo wanaag ah ay geysatay waxaa ugu danbeen lagu dilay magalada Nairobi ee dalka Kenya, taariikhdu markay ahay 24/10/2002, xilli ay isu diyaarnaysay ka qayb galka waan-waan heshiisiin oo u dhaxaysa maleeshiyo beeleedka Muqdisho. .
Waxyaabaha aan aadka uga xumahay ayaa ah in gabadhan iyo gabdho badan oo lamid ah ay taariikhdoodi dhumeen halka wax mataraayashii dadka laayay taaqriikhdooda adduunka dhan ay gashay. Gabdhaha inaan la weyneynin lana xusin taariikhdooda ee ragga gacan ku dhiiglayaasha ah la wadwado waa godob aad ka gasheen hablaha soomaliyeey!
Waxaa igu ballan ah waxa dumarka soomaliyeed qabteen inaan hortiina keeno qalinkeygana ugu adeego maalin walba. Bal ila wadaaga sababta ay ku dhacday in wax qabadkan aydnaan arkin??
QORMO LA XIRIIRTA: Mary Shelley
9 Bilood Kahor
Somalinimo weet baqtisey maantey cidii diinta wax ka sherktaa waa la gowrcayaa
Maxaa loo gudaa hablaha Soomaaliyeed?
Gudniinku inuu dhib wayn ku hayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka waan ognahay. Caafimaad darrada ka dhalata iyo xanuunka ay maraan haweenka la gudo maaha wax cid ka qarsoon, laakiin weli ma is waydiisey sababta loo gudo haweenka? Ujeedka iyo danta laga leeyahay jarjarista iyo tolidda xubinta taranka ee haweenka maxay tahay? Gudniinku waa caado dhaqameed soo jirtey muddo kumanaan sano...
Ilaalinta Xuquuqda Dumarka iyo Waddamada Islaamka!!
W/Q: Mo Yare
Qaybta: Dhaqan, Diinta Islaamka, Xulka
Xilligii ay go'aansatay dowladda Switzerland dhisitinakaa masaajiddada! Kama aan akhrin saxaafadda Carabta wax arrinkaas ku saabsan. Waxaan la yaabay markan ka akhriyey jariiradda Al wadan ee Sacuudiga kasoo baxda qaybteeda internetka bishi Maarso, 2010, maqaal uu qoray qoraa lagu magcaabo Turki Al-dakhiil. Maqaalkaas, oo ahaa mid uu kaga maadsanayo sida ay u ilaaliyaan xuquuqda xayaawanka dalka...
Ma maqashay nabi Maani?
Qaybta: Diimaha, Sooyaal
Maani Bin Futk (216-274 CD) wuxuu ku dhashay Baabil oo ahayd deegaan ay ka asaasmeen kana jireen ilbaxnimooyin waaweyn oo aduunka soo maray. Maani yaraantiisu wuxuu ku koray nolol aad u dhib badan waxaana laga qaaday isagoo aad u da’ yar hooyadii, aabihii ayaana kula biirey koox diimeed kale, koox diimeedkaas oo caan ku ahayd u ban-baxa cibaado iyo ka dheeraanshaha adduunyada. Taasi waxay u...
Qaybta: Diinta Hinduuska, Diinta Kiristaanka, Sooyaal
Sida ku xusan taariikhda Waraqat Bin Nawfal wuxuu ahaa nin ka mid ah dadkii deganaa magaalada Makka. Warqat wuxuu ahaa baaderi ku xeel dheer diinta masiixiga una banbaxay cibaado iyo werdi, wuxuuna madax u ahaa koox masiixiyiin ah oo reer Makka ah oo ay ka mid ahayd Khadiija Bintu Khuwaylad oo ay qaraabo ahaayeen, wuxuuna diidanaa ama ka mid ahaa koox diidanayd ilaahnimada Ciise, waana ninka ku...
Doodda Dumarka iyo Falsafadda
Qaybta: Falsafad, Sooyaal
Inkastoo ragga dumaka liidaa ay ku doodaan in dumarku aysan wax kaalina kulahayn horumarkii laga gaaray cilmiga iyo ilbax-nimada, hadana taariikhdu waxay noo sheegaysaa wax ka duwan sheegashadaas. Waxaa ay taariikhdu caddaynaysaa inay jiraan dumar badan oo kaalin muhiima kulahaa taariikhda, cilmiga, falsafadda, farshaxanka, suugaanta iyo siyaasadda. Hadaba waxaan jeclaan laa inaan muujiyo...
W/Q: Naimo Mohamed 18th June 2020
Maasooniyadda: Hummaagga Cabsida